Iinqwenkwezi eziye zafunyanwa nge-intanethi
Kuphi na I-Web Humor
6 Iinkwenkwezi Ongaziyo Zifunyanwe Ngayo Inthanethi
Ezi zithandathu zikhulula zonke i-intanethi zibulela udumo lwabo.
Ngesinye isikhathi, abadlali abancinci okanye iimvumi bafumana udumo ngendlela endala; ngokufudukela eHollywood, ukuya kwii-auditions ngelixa ulinde amatafula ukuba ufikelele, kwaye uthandaza "ziyafumaneka". Le mihla ingadluliselwa ngokukhawuleza nje, njengoko kubonakaliswe yi-superstars elandelayo ezintandathu eziqala ukuqala kwi-YouTube, blogs, kunye negama lomlomo.
Nazi ezinye zezona zidumileyo eziye zafunyanwa ngabantu abalungileyo be-interweb. Abadumileyo: Bafana nathi! Kulungile, kungekhona (okanye nonke) , kodwa kunjalo. Kupholile ukucinga ukuba unokufumanisa nje ngokuthumela i-Vine video okanye "ngengozi" ekhupha isondo lakho lesini. Yeyiphi ixesha lokuphila!
UMelika kuqala "wadibana" nenkwenkwezi uKim Kardashian xa sambona kwi-tabloids, ukuthabatha kunye ne-socialite eParis Hilton ekuqaleni kwee-2000, kodwa akazange abe ngumdumo ngokugqithiseleyo kwaze kwaba yilapho umculi wakhe we-R & B u-Ray J ebetha iwebhu ngo-2007. Emva kokuba iziqwatho ezivela kwividyo zifakwe kwi-intanethi, i-Kardashian yaba igama lomntu waza wafumana i-E! Ngoku ukuba utshatile kuWe Kanye West uye ngokusemthethweni waba yinto eyaziwa kakhulu (kunye kunye nabamkelwa rhoqo ) abaziwayo bonke ixesha.
Kananjalo kunokuba ahlukumezeke kwi- Photoshopping imifanekiso yakhe yemidiya yoluntu , kodwa ayikho yoshishino lwam.
Bazarar Via Harper.
UKate Upton wayengumzekelo osebenzayo ogunyazisiweyo wakhe, i-IMB, wayekhathazekile ukuba " akayifani ngokwaneleyo" ngemilinganiselo yendlu yefestile, de kube umhlobo alayishe ividiyo ehamba neyintsholongwane. Kwividiyo, u-Upton wenza ingqungquthela yokubamba ingqungquthela ye-bouncy ye-"Dougie" kumdaniso we-LA Clippers (ngokugxininiswa kwi "bouncy.")
U-Kate ngoku udumileyo ngokwaneleyo ukuba ahlasele ama-Photoshop amaxesha onke. Uyakhumbula le ngxowa yeHarper yeBazaar ? Ouch.
Ekubeni u- Justin Bieber unjalo-nkwenkwezi, abantu abaninzi abaqapheli ukuba uqale e-Ontario, Canada, ngokulayisha iividiyo kwi-YouTube ngokwakhe ngokwenza iingoma ze-R & B. Emva kweenyanga ezisixhenxe kunye neenkulungwane ezilishumi kwiimbono, uBieber wakhangela umphathi wakhe wexesha elizayo, u-Scooter Braun, owamnika ingxelo yokuqala yokurekhoda. Xa useneminyaka eyi-13, uBieber wasayina isivumelwano kunye nomculo we-R & B nomculo we-Usher, kwaye ngoku, uBieber uthengise ama-albhamu angaphezu kwezigidi eziyi-15 emhlabeni jikelele.
UCarly Rae Jepsen
Umculi waseCanada uCarly Rae Jepsen wayesele ezenzela igama lakhe kwilizwe lakhe, kodwa akazange abe yi-superstar yamazwe ngamazwe kwaze kwaba yilapho ividiyo ye-YouTube iyenzayo enkulu, "Ndibize Mhlawumbi" yabonwa ngumculi waseCanada, uJustin Bieber. U-Bieber uthumele ngeengoma malunga neengoma zakhe kwizigidi zama-abalandeli, kwaye into elandelayo uyazi, ingoma yaqhuma kwi-charts yase-US yasePapa kwaye yaba yindlebe esemthethweni ye-2012.
Umqhathaniswa uBo Burnham wayeneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala xa eqala ukwenza iividiyo zegama lakhe elikhethekileyo lokuhlaziya nokuzilayisha kwi-YouTube. UBurnham, owaziwayo ngeengoma zakhe zangaphambili ezingalunganga kwezombusazwe kunye neentlanzi ezibandakanya uhlanga, inkolo kunye nezinye izinto eziphathekayo, uzuze udumo ngokukhawuleza kunye nokubonga kwangaphambili, ngokuyinxalenye, ukuhlaziya i- Break Break site. Emva kwevidiyo zakhe ze-YouTube zigqithise iimboniselo zezigidi ezingama-70, uBurnham wathatha i-arhente waza waqalisa ukwenza iiklabhu zemidlalo kunye neekomidi. I-Comedy Central isayine iBurnham ngokukhethekileyo ubude obude nje emva kweentsuku emva kokuzalwa kwakhe kwe-18, okwenza ukuba ngumncinci omncinci ukuze azuze loo mbeko.
Imifanekiso enesidima: BuzzFeed.
Ekugqibeleni kodwa kunzima, kulukhuni ukucinga nje ngehlabathi ngaphandle kweCatumpy Cat! Ngokuqinisekileyo, akayiyo idumo lomntu, kodwa ucinga ukuba unemifanekiso yefilimu, iwebhusayithi, i-fan enkulu elandelayo, kunye neeninzi kunye nokuthengwa kwempahla eninzi ithengiswa imihla ngemihla, ngokuqinisekileyo i-superstar ayikho enye.
Masingakulibali ukuba i-Grumpy Cat yinto yesithsaba sesithsaba sama- 10 amaninzi kwiIntanethi .
UKUPHILA KWENKQUBO: 25 Ye-WORST Celebrity Photoshop Ihluleka Konke ixesha.
Yonke inkohliso kwaye akukho nto iyinyani! Khumbula ukuba ixesha elizayo uziva unombulelo ongeyaneleyo kwisithombe esichukumisiweyo nge-airbrush.
Izinto eziphathekayo eziziqhenqileyo-Izinto ezinqwenelekayo ezikhethiweyo Awuyi Kukholelwa Omnye Ugawulayo
16 Iimemese ezimnandi malunga neSpres
Amakati Aphi Ubungakanani BamaJerk, Kungenxa yokuba
25 I-Hilarious Bathroom I-Design Design ihluleka Ufanele Uyibone Ukukholelwa
Ezi ziPapasho zeNgcaciso ze-4chan Zizathu Zokuba Sithembele Kwiingxaki
Imbali emfutshane ethi "Uthando lu ..." Amaqhinga ngoKim Casali noBill Asprey
20 Iindawo eziphathekayo eziphathekayo ezinobungozi
20 Izimpawu Ezibonisa Ukuba Ukukhethwa Kwefonti Kubalulekile
Busted! Izidumi ezili-10 zafunyanwa ziziqhwaphu
I-20 ye-Photos Weirdest Wedding Yayisithathwa
I-Biographie kaLeonardo Da Vinci: uLuntu, iNzululwazi, iNzululwazi
Ngaba iVampires Real?
Iincwadi zemihla ngemihla, ii-Autobiography kunye neMemoirs for Teens
Ikhefu ye-Shelby GT / SC Mustang
Iqhwaba, Imvula eqinile
À vs. De: IziPhulo zaseFransi
Indlela Yokuba Mensch
Iilwimi ezingavumelekanga: Ukususela kwi-H ukuya kwi-S
Iiphathobhile eziPhambili zeNkcukacha zokuQala eziPhambili
I-Architecture ye-Monumental Architecture - Iintlobo kunye neenkcukacha
Imfazwe ye-Jenkins Intloko: Ilungelelaniso kwiNgxabano enkulu
Ukucoca Umlenze Wakho
Izizathu eziphambili zokuthanda iPlasti kunye neeBiliyadi
'Isipho seMagi' Imibuzo yeSifundo kunye neNgxoxo
Ukungabikho kweNyoka yokuthetha
Iinqununu ezingundoqo zeJografi
I-OEM iClubs Golf
Iingcamango zeProjekthi zeSayensi zeNzululwazi